Izany no fanontaniana tiako apetraka amin’ny Malagasy rehetra. Nankalaza ny Fahaleovantenan’ny Firenentsika isika ny Alarobia lasa teo. Moa ve fahatsiarovana sy fankalazana fotsiny iny ka tsy maintsy atao, sa misy mahasoa ny fampandrosoana ny firenentsika. Tiako raha ampitahaina ny Andron’ny Fahaleovantena ny 26 jona sy ny 4 jolay, mba hahitana hoe inona no tsoahin’ny Amerikana amin’ny fankalazan’izy ireo. Etoana,dia mirary soa ihany koa ny Amerikanina rehetra noho ny fitsingerenan’ny fotoana nahazoan’izy ireo ny Fahaleovantena. 😀
English version avalaible on https://bit.ly/2KSLOJ6
26 Jona – 4 Jolay: fankalazana saika mitovy
Tsy hanazava iray manontolo ny fanaon’ny Amerikanina aho rehefa mankalaza ny fahaleovan-tenany izy ireo. Saingy hilaza sasantsasany amin’ireo fomba fanaon’izy ireo izay nolazain’ilay namako amerikanina tamiko. Raha ny marina, ny fankalazana dia misy itovizany kely amin’ny antsika. Manao fihaonam-be ihany koa izy ireo, tsy toy ny an’i Madagasikara, satria tsy fianakaviana iray no manao fiarahana mifaly fa ireo mpifanolo-bodirindrina,ka samy mitondra ny anjarany avy. Nantsoin’izy ireo hoe « Bloc Party ».
Mandritra io fotoana io dia miala voly indrindra izy ireo mba hanaporofoana ny Fahaleovantena, misotro, mihinana sady mijery afomanga.
Tsy milalao « arendrina » izy ireo, fa ny fanaon’ny ankizy kosa dia manaingo ny bisikiletan’izy ireo ary mizara ny hafaliany amin’ny fitondrana izany enti-mifaly manerana ny tanàna. Manao kilalao “tsipoapoaka” ihany koa izy ireo! Ny tena manaitra dia ny hoe na dia firenena lehibe tokoa aza i Etazonia, dia tahaka izany no fomba fankalazan’ny olona rehetra manerana io firenen-dehibe io. Tahaka ny eto Madagasikara, any amin’ny faritra rehetra eto amin’ny firenena, mankalaza ny fahaleovan-tena amina fomba iray isika.
Inona no tsoahina avy amin’ny Fahaleovantena?
Ity ampahany ity izay hitako tamin’ny fankalazana ny fahaleovantenan’ny Amerikana ity, dia tsy hita loatra nandritra ny fankalazana ny fahaleovantenantsika. Azo antoka fa misy ny kabary mandritra ny fahaleovan-tena malagasy na miresaka momba ny fomba fijery vaovao. Saingy, tsy mbola naheno an’ity fanontaniana ity ny tenako, tao anatin’ireny fivoriam-pianakaviana natao nandritra ny andron’ny 26 jona.
Io resaka io dia natao nandritra ny lanonana ao amin’ilay « Bloc party ».
Ka ny olom-pirenena tsirairay dia miara-misaina ary mandinika ny azony hatao amin’ny fireneny. Tsy mpiasam-panjakana izy ireo, na ihany koa hoe mpanao politika fa ny andro fahaleovantena dia mitarika azy ireo hamakafaka ny fireneny, mba hilaza ny hevitr’ireo hevitra hanatsarana azy.
Ny fanadihadiana toy izany dia soso-kevitro ho an’ireo izay mirehareha amin’ny maha malagasy azy. Andeha hojerentsika ny fanatsarana ny firenentsika amin’ny fomba tsara indrindra. Aza miandry ny rehetra hifoha, na ihany mitady ny diso ary hanakihanan. Ny Andron’ny Fahaleovantena dia azo antoka fa fomba tsara hialana sasatra, nefa koa fotoana tokony handinihintsika ny fivoaran’ny firenentsika. Io fandinihina io no mitarika mba hivelatra misimisy kokoa ary hafantaranao ny anjara biriky ho entinao ho an’i Madagasikara.